PressReader - Isolezwe: 2019-01-11 - Isikhulu obishini ngokusweleka kwamanzi iminyaka emibili
Isikhulu obishini ngokusweleka kwamanzi iminyaka emibili
Isolezwe - 2019-01-11 - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE
SISOBISHINI isikhulu sikamasipala waseZululand esisolwa ngobudedengu obuholele ekutheni kube nezindawo osekuphele iminyaka emibili oLundi zingenawo amanzi.
IMeya yaseZululand, uMfundisi Thulasizwe Buthelezi, iveze lokhu emuva kukakhukhulelangoqo wombhikisho wabantu basoLundi, eNkonjeni Reserve naseNhlungwane ku-ward 24 abebehambise izikhalo zabo emahhovisi kamasipala.
Umholi womphakathi, uMnuz Mhlonishwa Khali, uthe iloli yamanzi ifika kanye emuva kwezinyanga ezintathu. Uthe imigwaqo nogesi kabanako. “Injini esiphehlela amanzi nayo ayinawo udizili, sithwele kanzima. Lokhu kusiphethe kabi ngoba sizamile ukuxhumana neMeya kodwa yasithumelela umsizi wayo. Ngemuva kwalokho kwathuleka yathi ayizitholanga izikhalo zethu yikho sinqume ukumashela kwamasipala waseZululand,” kusho uKhali.
Isolezwe lihabule kumthombo ongaphakathi eZululand ukuthi into eyenza kube nzima wukuthi amaloli afile kusele eyodwa ebiphakela u-ward 5 kodwa osekumele ihambele zonke izindawo. Nalawa afile awakhandwa kanti nodizili obufakwa emshinini ophehla amanzi eNkonjeni usuncishisiwe ngoba kuthiwa imali ayikho.
IMeya uButhelezi izwakalise intukuthelo ngalolu daba, ilubiza ngento yamabomu edalwa wubudedengu besinye isikhulu.
“Abantu baseNkonjane kufanele bakhale ngoba akwamukelekile ukuthi ungakhandelwa injini isikhathi eside kangaka. Siyaxolisa kakhulu emphakathini. Sinayo inkampani ezomba umgodi omusha. Izoqala umsebenzi eNkonjeni ngoLwesithathu oluzayo.
Okunye okumele kwenzeke wukuthi umqondisi wakwaTechnical kuzomele athathelwe izinyathelo ngoba inkinga enkulu yamanzi idalwa wukuthi uhlale engekho emsebenzini futhi uyahluleka ukulawula umnyango wezamanzi,” kusho uButhelezi.